I-Villa Váibmu - ubunewunewu ngendalo - I-Airbnb
I-Villa Váibmu - ubunewunewu ngendalo
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguNilla
Indawo yabantu abayithandayo indalo nokuzola, ukwakhiwa kwale ndlu yamaplanga ikumgangatho ophezulu isandul 'ukugqitywa kwaye ngoku ilungele iindwendwe ngexesha elifanelekileyo le-Aurora Borealis. Yiza uzonwabele uthe zava ebhedini yakho. Sicebisa ukuba ubhukishe ngoku kuba amaxabiso awazukuhlala ephantsi xa indawo isaqhuba kakuhle, ibe unethemba lokuba uza kufumana izimvo ezintle ezingezantsi kwebhanti.
Nangona senzelwe ukonwabela indalo, esi sakhiwo asinazo izinto onokuzisebenzisa zale mihla, njenge-wifi, isixhobo sokukhalisa umculo se-hi-fi, kunye neprojekta yevidiyo. Isitovu esisebenza nge-induction ekhawulezayo kunye nefriza okanye into yokupholisa ivumela ukupheka ngaphandle kwamagingxigingxi. Kwaye kwabo bakonwabela izinto ezenziwayo ezikhokelwayo ezifana nokukhenketha ngekhephu okanye ukutya ngaphandle, iWilderness Hotel Inari ikude ngeekhilomitha eziyi-2 kuphela.
Le ndlu isecaleni kweLake Inari ekwikhilomitha eziyi-5 ukusuka kwiziko lelali i-Inari, kungekho ezinye izakhiwo ezihlala abantu kufutshane, kwaye iyibona ngokuthe ngqo iLake Inari ukuya kutsho kwisayithi ye-UNESCO World Heritage Ukonkivi. Iifestile ezinkulu zenza kube lula ukujonga izibane zasenyakatho xa uthe zava ebhedini yakho, kwaye i-sauna enkulu ingangena lula kwiqela elikhulu. Iindwendwe zinokonwabela umlilo wazo egadini, kunye neenkuni zokubasa umlilo.
Umbuki zindwendwe ngu- Nilla
Ndivela kwintsapho yaseSami yabalusi baseInari, kodwa ngoku ndisebenza kwaye ndihlala eLondon. Bendinayo le ndlu yokuphola eyakhiwe ngeyona migangatho iphakamileyo ukuze ndiyonwabele xa bendityelele ekhaya, ndize ndiyirentise xa ndingekho. Awuzukufumana nto ifanayo kunxweme lweLake Inari.
Ndivela kwintsapho yaseSami yabalusi baseInari, kodwa ngoku ndisebenza kwaye ndihlala eLondon. Bendinayo le ndlu yokuphola eyakhiwe ngeyona migangatho iphakamileyo ukuze ndiyonwabe…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Inari